musha UNITED STATES BioGRAPHY STORies US Mabhirionari Evan Spiegel Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
CB inotaura Nhoroondo Yese yeAmerica Billionaire inonyanya kuzivikanwa se "Evan". Our Evan Spiegel Childhood Story pamwe ne Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwake. Zvimwe zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva iye mumwe wevaduku mabhiriyoni munyika yose. Zvisinei, vashomanana chete ndivo vanofunga nezvehupenyu hweEvan Spiegel hunofadza chaizvo. Iye zvino, tisingabatsirizve, ngatitangei.
Evan Spiegel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga, Evan Thomas Spiegel akaberekwa musi we 4th waJune 1990 kuLos Angeles muCalifornia, United States. Ndiye aiva mwana wedangwe akaberekerwa kubatana pakati paamai vake, Melissa Ann Thomas (gweta) uye baba vake, John W Spiegel (uyewo gweta).
Iyo nyika yeAmerica ndeyemuchomo wakachena neChirungu, Irland, German, French, Scottish, Swiss-German, Welsh uye Cornish mizi. Evan anobva kumhuri yakafuma uye akarererwa nevabereki vake paPacific Palisades muCalifornia.
Evan Spiegel baba John Spiegel. Credits: MTO.
Kukura muPacific Palisades pamwe chete nehanzvadzi dzake mbiri, Lauren naCaroline Spiegel, wechidiki Evan aiva mwana waive neve nezvose zvinogona kutenga mari, nekuda kwevabereki vake vane ruzivo. Evan akakurudzirwa neropafadzo yaive nekutambira $ 250 yemari yevhiki yega yega, achitanga kutengesa kazhinji, kuva nemupiki wega uye kushandisa mari yake yechando uye yezhizha muMui neLa LaLaolla Beach. Nokudaro, chido chakanga chisipo kubva paEvan achiri mwana kusvikira apinda murudo nemapurogiramu panguva yechikoro chake chesekondari.
Evan Spiegel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Dzidzo yeEvan inosanganisira zvidzidzo zvake pa Crossroads School for Arts and Sciences muSanta Monica. Paaiva achiri kudzidza kuchikoro, Evan akazonyora kuOtis College yeArt uye Design apo akawana zvidzidzo mukugadzira ndokudanana nebasa racho.
Pakazosvika Evan kusvika makore akakura paCroadsroads, akawedzera dzidzo yake mukugadzirwa nekupinda makirasi paArt Center College Design muPasadena. Izvo-wechidiki zvakare akashandisa nguva yekutora chikwereti chisina kubhadharwa paRed Bull apo ainge aiswa kune zvakasiyana-siyana kutengesa nekugadzirwa kwemishonga.
Evan Spiegel akawana chikwereti chemari paR Red Bull paakanga achiri kuchikoro chesekondari. Credits: WP uye Recode.
Evan Spiegel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Paakapedza chikoro chesekondari, Evan aiziva kugadzirwa kwaiva nzira yaaifanira kutevera. Nokudaro akanyoresa kuStanford University kuti adzidze chigadzirwa. Yaiva paStanford University iyo Evan akasangana nemumwe mudzidzi Bobby Murphy waakashanda naye kugadzira mapurogiramu maviri akazopedzisira atadza.
Chokutanga chaive paInternet social network yakafuridzirwa neGoogle Circles apo imwe yacho yaiva webhusaiti - futurefreshman.com - chinangwa chekubatsira vashandisi kugadzirisa zvidzidzo zvekolishi. Dovo akazobatanidzwa nomumwe mudzidzi Reggie Brown uyo akave nepfungwa yekuita basa ravo rinotevera.
Evan Spiegel (kuruboshwe) akasangana neVa Co-founders of Snapchat - Reggie Brown (pakati) naBobby Murphy (kurudyi) kuStanford University. Credits: Business Insider
Evan Spiegel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Road To Fame
Reggie Brown akauya nemafungiro ekugadzira mifananidzo yezvinonyangadza app uye Evan akatanga kutanga maitiro akavakirwa pamusana pekuzviisa semuongorori weimwe yezvidzidzo zvake. Vatatu vacho vakashanda pamwe chete pamusoro pechirevo chokukudziridza pfungwa iyo yakatanga kunzi "Picaboo."
"Picaboo" haina kugamuchirwa zvakanaka nevaaidzidza navo Evan vaitenda kuti mapikicha ekunyangarika mapurogiramu haaizobudirira. Yaiva nguva imwe chete iyo Evan ainge achinzwa naReggie Brown. Kunyange zvakadaro, Evans neshamwari yake Bobby Murphy vakabva vadzoka zvakare "Picaboo" se Snapchat mu2011.
Evans neshamwari yake Bobby Murphy vakatora Snapchat mu2011. Credits: Philnews.
Evan Spiegel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Kusiyana nekutenda kweavo vaanodzidza navo, Snapchat yakanyora kukura kwakasimba pakuzivikanwa, chiitiko chakaita kuti Evan adzike kubva kwunivhesiti kuisa pfungwa pakuvandudza purogiramu pasinei nokuti iye ava pedyo nekupedzisa.
Snapchat munguva pfupi yakabva yakashandurwa mune shanduro yefaira ye multimedia uye mharidzo yemifananidzo. Kufambira mberi kwakashata kusvika kune zuva hakuna zvishoma pane mifananidzo ye9000 iri kutumirwa kwechipiri uye kupfuura mamiriyoni emamiriyoni emamiriyoni / mavhidhiyo ari kugoverwa zuva rimwe nerimwe ne-app !. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Evan Spiegel Inokura Mukurumbira neNyoka. Chikwereti chandigarhmetro
Evan Spiegel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Evan Spiegel murume akaroora. Tinokuudzai nezvekufambidzana kwake nehukama uye ukama nguva inosanganisira kusangana kwaakaonana ndokuroora mudzimai wake wekuAustralia akazvarwa Miranda Kerr. Kutevera kubuda kwaEvan mukurumbira, aive achida kuratidzirana nevakadzi vakawanda vari kuHollywood kumusoro echelons kusanganisira Mutumbi Taylor swift asati asangana nemudzimai wake Miranda Kerr mu2015 pane imwe kudya yeLouis Vuitton kuNew York.
Evan Spiegel akatanga kutamba nemu Miranda Kerr muna 2015. Credits: Hawtcelebs.
Miranda akanga ari panguva iyo supermodel uye muzvinabhizimisi ane chinyorwa chake chezvinhu zvekuchengetedza ganda zvinonzi "KORA Organics". Dhoo yacho yakatarwa kwemwedzi ndisati yatanga kubatanidzwa mu2016. Vakasunga pfumo pa 27th yaMay 2017 pamusangano wega wega paimba yaEvan.
Evan Spiegel naMiranda vakaroora musi we 27th waMay 2017. Credits: YouTube.
Gore rakatevera, imba yavo yakakomborerwa nemwanakomana - Hart Kerr Spigel - akaberekwa pa 7th yaMay 2018. Evan anovewo baba vaFlynn, mwana wemakore masere akaberekwa nemudzimai wake wekutanga akaroorwa nemuimbi we Orlando Bloom.
Evan Spiegel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Evan Spiegel akaberekerwa mumhuri yakafuma yevane 4. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
NezveEvan Spiegel Amai: Melissa Ann Thomas amai vaEvan uye vakapedza chikoro cheHadard Law chikoro avo vakashanda semurengeti wemutero. Asati aroora nababa vaEvan, John, Melissa vakabatsira kurera vana vavo seEpiscopalians pamusha wavo we $ 2 mamiriyoni paPacific Palisades. Iye ane nzvimbo yakaderera yeEvan uyo akafanirwa kukodhara motokari shure kwekunge baba vake vamuramba chikumbiro chake che BMW.
Nezvebaba vaEvan Spiegel: John W. Spiegel baba vaEvan. Iye ari mubatsiri pamutemo wemutemo Munger, Tolles & Olson uye akamirira vatengi vakadai saTransocean Ltd naWarner Bros. John akaroora amai vaEvan apo Internet muzvinabhizimisi aive achiri kuchikoro chesekondari. Mushure mekurambana, Evans akasarudza kurarama nababa vake kudzura asi munguva pfupi akashandura misasa kuimba yaamai vake nokuti John akaramba kumutengesa motokari BMW.
Nezvevana vaEvan Spiegel: Evan ine hanzvadzi mbiri duku - Lauren naCaroline Spiegel - avo vaakakurira. Chinyanyozivikanwa pamusoro pehanzvadzi mbiri dzisiri kunze kwekuti ivo vaiva nerudziro rwakakosha saEvan uye vanofarira zvinhu zvakanakisisa zvehupenyu.
About Evan Spiegel Relatives. Kubva kuEvans mhuri yepedyo, vanasekuru nababa vake Hart Hunter Spiegel naGenevieve Josephine apo baba vake naamai vake naFrank Henry Thomas naAnn Theresa Beyerle vari voga. Evan anewo vanamunini, vanamainini, vanun'una, vanin'ina nemukomana vaanenge vachiri kuzivisa.
Evan Spiegel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Zvimwe Zvako
Chii chinokonzera Evan Spiegel tsiru? Gara shure apo isu tichikuunza iwe maitiro eEvans kuti akubatsire kuwana mufananidzo wakazara wake. Kutanga, Evan munhu wekuvanda uyo akamborondedzerwa seasingatauri uye anotongesa zvinoshamisa nevakawanda.
Pachiedza chakajeka, Evans arikusika, anorarama munguva ino uye anotsigira kuti vamwe vanhu vanoita zvakafanana. Kusiyana nedzimwe vashandi vezvepanternet, Evan anonyanya kuisa kuchengeteka kwevanhu uye anosarudza kuva nevarwi vakashonga vakamupoteredza. Zvimwe zvinofadza zvinosanganisira kuverenga, kubhururuka helicopter uye kutarisira maruva.
Evan Spiegel anorarama munguva ino uye anokurudzira vamwe kuti vaite zvakafanana. Credits: CNBC.
Evan Spiegel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Lifestyle
Sezvakaitika panguva yekunyora, Evan inofungidzirwa kuti inokosha yeHNUMX Billion USD, imwe nhamba iyo inonzi 2.3 madhora mabhiriyoni pasi pekodzero yemunhu akapfuma munyika Jeff Bezos.
Asi zvisinei, Evan anorarama hupenyu hwemabhiriyoniyoni. Saizvozvowo, kugara kwake kuBrentwood kunokwana $ 12 mamiriyoni. Imba inozvirumbidza neHNUMX yakawanda dzimba dzepamusoro pakati pezvivako zvakadai sehombe, imba yekuita gym etc
Evan Spiegel $ 12 mamiriyoni eimba kuBrentwood. Credits: The Coverage.
Iyo Co-founder yeScapchat ave achida motokari dzinodhura kubva pamazuva ake achiri kuyaruka. Gara rake rakazara nemotokari zvinyorwa zvinosanganisira Cadillac Escalade chipo chake nevabereki vake mu2006. Mimwe ndeye 3 Lexus mhando dzemoto, a 1966 mustang naFerrari.
Evan Spiegel ane Ferrari mumotokari dzake. Credits: OC
Evan Spiegel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Untold Facts
Asati atyoresa kuStanford University Evan akashanda semari yakabhadharwa kune imwe kambani yezvinyorwa, uye gare gare semudzidzisi webasa kuSouth Africa.
Akashandura $ $ 3 bhiriyoni kuti awane Snapchat mu2013. Inyanisi yebhizimisi haana zvikonzero zvekushungurudza chisarudzo chake achifunga nezvekuti Snapchat inoramba ichiwedzera simba.
Evan Spiegel vakaramba Mark Zuckerberg's $ 3 mabhiriyoni kuti vape kutenga Snapchat mu 2013. Credits: Business Insider.
Evan muKristu uye wechitendero pane izvozvo. Akakurira Episcopalian uye akabatanidzwa nechiKristu sechitendero chake.
Muna 2014 Evan akagadziriswa mubatanidzwa weScapchat Reggie Brown $ 157.5 mamiriyoni. Mari yakaitwa Reggie Brown inopomera mhosva iyo inoti Evan yakaramba kumupa chikwereti kana kubhadharwa kwezvipo zvake pakugadzirwa kweScapchat.
Evan Spiegel Utano Hwangu Plus Untold Biography Facts: Video Summary
CHOKWADI KUTI: Vongai nekuverenga kwedu Evan Spiegel Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!